Magacyada iyo qabiilada ay u dhasheen xildhibaanada Aqalka hoose ee maanta lagu doortay Garoowe – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Magacyada iyo qabiilada ay u dhasheen xildhibaanada Aqalka hoose ee maanta lagu doortay Garoowe
Waxaa maanta magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal lagu soo gaba-gabeeyay codadka wejiga labaad ee doorashada xubnaha Puntland u matalaya Aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Doorashadaan oo ahayd mid ay ku tartamayeen musharixiin badan ayaa maanta lagu doortay ilaa 6 xildhibaan ee ka mid noqon doonna 37 xildhibaan ee Puntland u matali doonta Aqalka hoose ee baarlamaanka cusub Soomaaliya.
Goobta ay doorashada ka dhaceeysay maanta ayaa waxaa goob-joog ka ahaa guddiga doorashooyinka dadban ee heer Puntland iyo heer federaal, iyo sidoo kale kor-joogayaal ka socda bulshadda rayidka ah.
Hoos ka aqriso xubnaha Puntland ee Aqalka hoose iyo beelaha ay kasoo jeedaan:-
1- Siciid Xuseen Ciid oo u dhashay beesha Carab Saalax, wuxuu helay 48 cod, wuxuuna ka guuleystay musharaxa kale Maxamuud Rooble Maxamed oo helay 1 cod oo kaliya.
2- Zakeriye Maxamuud Xaaji Cabdi oo u dhashay beesha Leylkase, wuxuu helay 32 cod, wuxuuna ka guuleystay musharaxa kale ee lagu magacaabo Mukhtaar C/risaaq Yuusuf oo isna helay 19 cod.
3- Burhaan Aadan Cumar oo u dhashay beesha Awrtable, wuxuu helay 51 cod, wuxuuna ka guuleystay musharaxa kale ee lagu magacaabo Mowliid Maxamed Saciid oo isna wax cod ah helin.
4- Jaabir Maxamed Cabdi oo u dhashay beesha Awrtable, wuxuu helay 32 cod, wuxuuna ka guuleystay labada musharaxiin ee kala ah Dr Cali Nuur Xuseen Ducaale oo helay 19 cod iyo C/xafiid Cali Yuusuf oo isna aan wax cod ah helin.
5- Saciido Maxamed Xasan oo u dhalatay beesha Laylkase, waxay heshay 43 cod, waxayna ka guuleysatay labada musharixiin ee kala ah Xaawo Cabdulaahi Maxamed oo heshay 8 cod iyo Shamsho Faarax Daahir oo iyadana aan wax cod ah helin.
6- Sacdiyo Carays Ciise Kaarshe oo u dhalatay beesha Awrtable, islamarkaana ah gabar uu dhalay Allaha u naxariistee gabayaagii weynaa ee Carays Ciise Kaarshe waxay heshay 31 cod, waxayna ka guuleysatay Luujiyo Yuusuf Xaraare oo iyadane heshay 19 cod oo kaliya, waxaana xumaaday 1 cod.
Ugu dambeyntii, Guddiga doorashada ayaa sheegay in maalinta berri ay sii socon doonto doorashada islamarkaana loo tartami doonno hal kursi oo kaliya, halka 18-ka kursi ee harsan doorashadeeda maalmaha soo socdo la qaban doonno.